Muxuu Ku Soo Dhamaaday Kulankii dhaxmaray kooxaha Elman Iyo Muqdisho City Club? – Gool FM
(Soomaaliya) 26 Juunyo 2019. Kooxaha Elman iyo Muqdisho City Club ayaa galabta kulan xiiso badan kuwada dheelay garoonka banadir Stadium ciyaar ka tirsaneyd horyaalka Somali Premier League.
Qeybtii koowad ayaa lagu kala nastay 2-2 waxaana goolka la horeysay wiilasha Muqdisho City Club waxaa u dhaliyay Feysal daqiiqado kadib Elman ayaa la timid goolkii barbaraha waxaana u dhaliyay ciyaarayahan Anwar Shakunda kulanka ayuu ka dhigay 1-1.
Balse isla qeybtii hore Muqdisho City Club ayaa goolkii 2-aad ciyaarta dhalisay waxaa u dhaliyay ciyaaryahan Xasan Santo kulanka ayuu ka dhigay 2-1 ay ku horkaceyso MCC.
Kooxda Elman ayaa dadaal u gashay si ay iskaga soo bar bareyn laheyd waxeyna la timid goolkii bar baraha waxaa mar kale shaqada tagay ciyaaryahan Anwar Shakunda, kulan ayuu ka dhigay 2-2, sidaas ayaa lagu kala maray dheesha.
Qeybtii dambi labada kooxod waxey iska qasaariyen fursado badan oo goolal loo filan karay balse ma aysan noqon in midkood uu gaaro shabaqada.
Ugu dambeyn kulanka ayaa ku soo dhamaaday barbaro 2-2 ah, Elman ayaa iminka leh 29-dhibcood halka MCC ay leedahay 26-dhibcood.